Android 10 hadda waxaa lagu heli karaa beta loogu talagalay OnePlus 6 iyo OnePlus 6T | Androidsis
Android 10 hadda waxaa lagu heli karaa beta loogu talagalay OnePlus 6 iyo OnePlus 6T
Laga soo bilaabo Sebtember 3dii, nooca ugu dambeeya ee Android 10 ayaa horeyba loogu heli karaa dhammaan bareegyada Android ee shirkadda raadinta, taas oo ah, Google Pixel. Laga bilaabo taariikhda, mar kasta oo ay yihiin shirkadaha wax shaaciyey taariikhaha sii deynta suurtogalka ah ee cusbooneysiinta boosteejadaada.
Marka hore, waa inaad maraa wajiga beta, wajiga beta oo badanaa socdaa wax yar ka badan bil inta badan kiisaska, ka hor intaadan bilaabin nooca ugu dambeeya. Soo saaraha ugu dambeeya ee furaya wajiga beta ee Android 10 qaar ka mid ah boosteejooyinkiisa waa OnePlus iyada oo loo marayo OnePlus 6 iyo OnePlus 6T.
Labada terminaalba waxaa la soo bandhigay rubucii ugu horreeyay iyo kii ugu dambeeyay ee sanadkii hore, in kasta oo ay xaqiiqda u muuqato inay suuqa ku sii jireen muddo aad u dheer. Dhowr saacadood, waxaad horeyba u rakibi kartaa beta-kii ugu horreeyay ee Android 10 labada boosteejo. Iyadoo hal sano oo kaliya suuqa lagu jiro, la filayo in lagu cusbooneysiiyo Android 10, sidaas darteed warkan waa inuusan ka yaabin qof, tan iyo markii lagu daro, soo-saarahaani waa mid ka mid ah kuwa fidiya cusbooneysiinta boosteejooyinkiisa ugu dheer.
Haddii aad rabto kala soo bax Android 10 beta-ka OnePlus 6 ama OnePlus 6T waxaad si toos ah uga sameyn kartaa goobta OnePlus. Ahaanshaha beta, xasiloonida nidaamka iyo shaqaynta shaqooyinka qaarkood labadaba kuma filna, sidaa darteed waa inaad xisaabta ku darsataa ka hor intaadan rakibin.
Beta-kani lagama heli karo OTA, markaa waa inaad sameysaa soo dejiso oo rakib qaybtan gacanta Kumbiyuutar ahaan ama adeegsiga rakibayaasha uu OnePlus noo soo diyaariyo haddii aan dooneyno inaan ka sameyno qalabka. Taasi waa, ugu horreyntii, samee nuqul nuqul ah dhammaan waxyaabaha aad xiiseyneyso inaad awood u yeelato inaad soo kabsato haddii ay dhacdo hawsha rakibida. Nidaamku badanaa kuma fashilmo kiisaska badankood, laakiin marwalba waxaa suurtagal ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Android 10 hadda waxaa lagu heli karaa beta loogu talagalay OnePlus 6 iyo OnePlus 6T
Safar ugu bax adduunka oo dhan si aad u ogaato dhaqanka iyo taariikhda waddan kasta oo ku yaal Exactamundo: World Trivia Tour